Imikhiqizo Yemakethe Yokuhlobisa Izinwele: zonke izinhlobo zezinsiza zezinwele, amabhande ezinwele, iziqeshana zezinwele, amakamu ezinwele, amawigi…
I-Hair Ornament Market Scale: cishe izitebele ze-600
Indawo Yemakethe Yomhlobiso Wezinwele: Isigaba A no-B, F2, Yiwu International Trade City D5.
Amahora okuvula Imakethe Yokuhlobisa Izinwele: 09:00 - 17:00, unyaka wonke ngaphandle kokuvalwa phakathi noMkhosi Wasentwasahlobo.
Imakethe yemihlobiso yezinwele ingenye yezimakethe ezithuthuke kakhulu nezinempumelelo e-Yiwu.Leli yidolobha lokuhwebelana lamazwe ngamazwe e-Yiwu elinazo zonke izinsiza ezidingekayo njengesistimu ye-air-condition, imishini ethengisa iziphuzo nezindawo zokudlela.
Kodwa-ke, inkinga enkulu yale makethe manje ukushoda kwendawo.Kugcwele kakhulu!Lokhu futhi kuwubufakazi bokuthi ibhizinisi lapha lihle kakhulu.
Kufanele ngisho ukuthi imakethe yezesekeli zezinwele iyipharadesi lendoda yebhizinisi ehlobene kulo mugqa.
Abahlinzeki babonisa amasampula abo emadokodweni abo abuyekezwa njalo, ungangena edokodweni ukuze ukhethe izimpahla, futhi uma unezinto ezithile ongazitholi emakethe, ungabuza isitolo ukuthi ubani ocabanga ukuthi bangakuthola. yenza lezi zinto ukuze uzikhiqize.
Okubaluleke kakhulu ukuthi ngeke ucelwe amanani amakhulu kakhulu kule makethe.
Uma ungena esitolo has stock, ungakwazi ukuthenga inani elincane kodwa mix imiklamo noma yini oyithandayo.Kungakhathaliseki ukuthi unezitolo ezimbalwa noma unesitolo esisodwa nje, le makethe iyisinqumo esingcono kakhulu sokuthenga kwakho.
Enye into okufanele ngikutshele yona ukuthi le makethe inamandla amakhulu okuvuselela imikhiqizo.
Lapho ezinye izinto ezintsha ziphuma, ungazithola zisuka nje emakethe ye-yiwu.Lesi sizathu sidala ukuthi amakhasimende athile abuye futhi abuye ezinyangeni ezi-2 noma ezi-3, ngoba afuna ukubamba imfashini yemfashini okokuqala ngqa.
YIWU HAIR AACESSORIES MARKET WONKE
Izwe lezinsiza zezinwele ngentengo eshibhe ngendlela emangalisayo, ikhwalithi iqinisekisiwe.
1800+ showrooms, 2200+ abahlinzeki, imakethe enkulu kunazo zonke yezinsiza zezinwele eChina.
I-wholesale eqondile yefekthri, izinto ezintsha zibuyekezwa nsuku zonke.
I-MOQ iphansi kuya kukhathoni elingu-1 into ngayinye.
Umbukiso wonyaka wonke.
Awukwazanga ukuthola okufunayo?
Ukuphrinta kwelogo yangokwezifiso, ukulebula nokupakisha kabusha kunikwe amandla.Izinto zakamuva kanye nohlu lwamanani luzothunyelwa ngesicelo.I-Wholesale kuphela.Awukwazanga ukuthola okufunayo?Sishiyele ulayini sizowuthola noma senzele wena.